I-US yangena kwiMfazwe yaseVietnam ngenzame yokuthintela ukusasazeka kobuKomanisi .
UbuKomanisi yinto ekhangayo kakhulu, ngokukodwa kwiindawo ezihluphekayo zelizwe elikhulayo. Khawucinge ngolu hlobo apho kungekho mntu uphumelele okanye ocebile kunakho, apho wonke umntu esebenza kunye kwaye ahlanganyele kwimveliso yezabasebenzi, kwaye apho urhulumente edala umnqabiseko wokhuseleko lwengqesho kunye nokunakekelwa kwezonyango kubo bonke.
Ewe, njengokuba sibonile, ubuKomanisi abusebenzi ngale ndlela ekusebenzeni. Iinkokheli zezopolitiko zihlala zibhetele kangcono kunabantu, kwaye abasebenzi abaqhelekileyo abavelisi kangangoko xa bengayi kuzuza ukufumana izibonelelo zabasebenzi babo.
Kwiminyaka ye-1950 kunye neye-1960, nangona kunjalo, abantu abaninzi kwimimandla ephuhlisayo, kuquka iVietnam (eyayiyingxenye ye- French Indochina ), banomdla wokuzama indlela yobuKhomanisi ukuya kurhulumente.
Ekhaya lokuqala, ukususela ngo-1949, ukwesaba kwabakhomanisi basekhaya baseMelika. Ilizwe lachitha ixesha elininzi lama-1950 ngaphantsi kwefuthe leLungu eliBomvu, elikhokelwa nguSenator we-Communist anti-communist Joseph McCarthy. UMcCarthy wabona amaKomanisi kuyo yonke indawo eMelika kwaye wakhuthaza umoya ozingela ukuzingela kunye nokungathembeki.
Ehlabathini, emva kweMfazwe Yehlabathi II ilizwe elizweni laseMpuma Yurophu liye lawela phantsi kolawulo lobuKomanisi, njengoko kwakunjalo neTshayina, kwaye umkhwa wawusasazeka kwezinye iintlanga kwiLatin America , e-Afrika nase-Asia.
I-US yabona ukuba ilahlekelwa yiMfazwe yeCold, kwaye yayifuneka "iqulethe" uKhomishini.
Kwakukunxamnye nalolu hlobo, ngoko, ukuba abacebisi bokuqala basezempi bathunyelwa ukunceda intlanzi yaseFransi amaKomanisi aseMntla Vietnam. Ngoo nyaka, iMfazwe yaseKorea yaqala, ibeka amaKhomanisi aseNorth Korea kunye nemikhosi yaseTshayina ngokumelene ne-US kunye ne-UN.
AmaFrentshi alwa eVietnam ukuze agcine amandla azo, kunye nokuzikhukhumeza kwelizwe emva kokuhlaziswa kweMfazwe Yehlabathi II . Babengafuni ukukhathazeka ngoKhomishini, ngokwabo, njengamaMelika. Xa kwacaca ukuba indleko kwigazi kunye nobutyebi bokubamba i-Indochina bekuya kuba ngaphezu kwamakholoni ayifanelekile, iFransi yaphuma ngo-1954.
I-US yenza isigqibo sokuba kufuneke ukuba ibambe umgca ngokumelene namaKomanisi, nangona kunjalo, kwaye yaqhubeka ithumela inani elongezelelweyo lemfazwe kunye nokwandisa inani labacebisi bezempi ukuze kuncedwe u-capitalist South Vietnam.
Kancinci, iU.S. yakhupha imfazwe yayo yonke yokulwa neNew Vietnamese. Okokuqala, abacebisi bezempi banikwa imvume yokubuyisa xa bexothwa ngo-1959. Ngowe-1965, iiyunithi zokulwa zaseMelika zazisetyenziselwa. Ngo-Ephreli ka-1969, ixesha elide elingaphezulu kwama-543,000 ama-US ase-Vietnam. Inani elingaphaya kwama-58,000 ama-US aseMixico afela eTietnam, kunye nabangaphezu kwama-150,000.
Ukubandakanyeka kwe-US kwimfazwe kwaqhubeka kwada ngowe-1975, kungekudala ngaphambi kokuba iNorth Vietnam iqhube i-capital yaseSaigon.
UBukumkani bukaShailendra weJava
Maldives | Iinkcukacha kunye neMbali
I-Angkor Wat Timeline
Yayiyintoni i-Kingdom Silla?
Ukuzonwabisa, iTheater, kunye neMculo yesiNgesi isigama
Iibhozo ezisibhozo zePagan Sabbats
AmaGitarta kaMichael Jackson
UHastings Banda, uMongameli wezeMpilo waseMalawi
Iintlobo ze-10 ze-Friends 'Minor Characters